Ra'isul Wasaaraha Ciraaq oo la sheegay inuu iscasilayo - BBC News Somali
Ra'isul Wasaaraha Ciraaq oo la sheegay inuu iscasilayo
Ra'isul Wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa sheegay inuu iscasilayo haddii uu xisbigiisa uu soo diyaariyo qofki beddeli lahaaa, hadalka Mr Mahdi oo ku soo beegmaya xilli ay mudaharaadyo dowladda Ciraaq looga soo horjeedo ka socdaan dalka Ciraaq.
Madaxweynaha dalka Ciraaq Barham Axmed Saalix ayaa sida oo kale diyaarinaya sharci cusub oo doorashada ku saabsan oo oggolaanaya in doorashada baarlamaanka xilligeeda laga soo hormariyo.
Tobannan kun oo shacab ah ayaa ka qayb qaadanaya mudaharaadyada bishan ka billowday dalka ciraaq, iyada oo ay mudaharaadayaasha ay dalbanayaan fursado shaqo, adeegyada bulshada iyo in la soo afjaro musuqmaasuqa ku baahay dalkaasi.
Inta ay mudaharaadyadaasi billowdeen iska horimaadyo dhex maray ciidamada ammaanka iyo mudaharaadayaasha waxaa ku dhintay dad ka badan 250 qof.
Khamiisti shalay ahaydna waxaa ku dhintay hal qof oo ka mid ahaa mudaharaadyaasha magaalada baqdaad mudaharaadka ka waday oo ay xabadka kaga dhacday sunta indhaha ka ilmeysiisa.
Buundada Jumhuuriya ee ku taallo magaalada Baqdaad
Hay'adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty International waxay sheegtay booliska rabshadaha ka hortaga iney ridayeen rasaasta sunta indhaha ka ilmeysiisa oo aad u badan, sunta ay shacabka u isticmaaleenna u yahay kan xoogga badan ee ciidamada looga talagalay, iyaga oo weliba mudaharaadayaasha kala beegsanaya madaxa iyo qaarka hore, iyada oo ay hay'addu caddeyn ahaan u soo dhigtay qof uu madaxa kaga dhacay.
"Waxaan haynaa caddeymo muujinaya bambooyinka sunta ee indhaha ka ilmeysiisa ee mudaharaadayaasha loo adeegsaday si xad ka bax ah, haddii si xad ka bax ah bambooyinka noocaasi shacabka loo adeegsadana ay keeni karaan dhaawac iyo dhimasho laga argagaxo" ayey tiri agaasimaha bariga dhexe u qaabilsan hay'adda Amnesty, Lyn Maalouf.
"Booliska Ciraaq waa iney ka fiirsadaan isticmaalka degdegga ee hubkaasi" ayey intaa ku sii dartay.
Maxay Shiicada u siyaartaan Karbala?
Mr Cabdul Mahdi, oo ah siyaasi caan ah oo ka soo jeeda Muslimiinta Shiicada takhasuskiisa wuxuu yahay dhaqaalaha, wuxuuna dalka Ciraaq uu Ra'isul Wasaare uu ka noqday sanad ka hor, isaga oo ballan qaaday inuu isbeddel sameyn doono balse waxaa lagu eedeeyaa ballanti uu qaaday inuu fulinin.
1-da bisha Oktober dhalinyarta reer ciraaq oo ka careysan sida uu ugu guul darreystay inuu wax ka qabto shaqa la'aanta baahsan ee dalkaasi ka jirto, musuqmaasuqa iyo adeegyada arrimaha bulshada ee dalka oo aad u liita ayaa waxay marki ugu horreysay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada Baqdaad.
Mudaharaadyadi caasimadda baqdaad ka billawdayna waxay ku sii fideen dalka oo dhan taasoo keentay iney ciidamada ammaanka ay isku dayaan iney mudahaardyadaasi awood ku muuquuniyaan dad badan ay sidaa ku dhintaan.
Mudaharaadyada qaybtooda hore oo lix maalmood oo xiriir ah socday waxaa lagu dilay 149 qof oo rayad ah, wixi intaa ka dambeeyeyna Ra'isu Wasaare Cabdul Mahdi wuxuu ballan qaaday inuu golahiisa wasiirrada isku shaandheyn uu ku sameynayo, mushaaraadka faraha badan ee ay qaataan madaxda sare ee dalkaasina uu dhimayo,sida oo kalana uu ballan qaaday inuu yareynayo camal la'aanta dhalinyarada dalkaasi haysato.
Balse, mudaharaadayaasha oo sheegay iney dowladda ka jawaabin cabashadooda ayaa dib waddooyinka ugu soo laabtay oo mudaharaadyadooda billaabay maalnti Jimcaha.
Waxayna mudaharaadayaashu mudaharaadkooda xuddun u ahaa fagaaraha weyn ee Taxriir oo ku yaalla bartamaha magaalada Baqdaad. Kaddibna waxay mudaharaadayaashu isku dayeen iney ka gudbaan kaabadda aagga cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo, halkaasi oo ay ku yaalliin xafiisyada dowladda looga arrimiya iyo safaaradaha waddamada kala duwan.
Isniintina wadaadka Shiicada ee hoggaamiya xisbiga kuraasta aqlabiyadda ku leh baarlamaanka Dalkaasi Moqtdah Al Sadri wuxuu R'aisul Wasaaraha uu ugu baaqay inuu ku dhawaaqo doorasha xilligeeda ka hor la qabto.
Maalinti xigtayna Mr Cabdul Mahdi wuxuu Mr Sadri warqad toos uu ugu qoray uu ugu sheegay inuu damacsan yahay inuu sidaa sameeyo, balse ay jiraan shuruudo dastuuri ah oo u baahan in la buuxiyo oo ay ka mid tahay "Ra'isul Wasaaraha inuu sii joogo".
Dibedbaxayaasha Ciraaq oo caburin hor leh wajahaya
Shaqaalaha dawladda Ciraaq oo kulayl dartii loo fasaxay
"Haddii ay ujeeddada doorashada ay tahay in xukumadda la baddalo, waxaa jira fursad aad u yar oo ah: inaad adiga iyo Hadi al-Amiiri aad isku waafqdaan inaad dhistaan dowlad cusub," ayuu ugu jawaabay isaga oo soo xiganaya hoggaamiyaha aqlabiyadda labaad ku leh baarlamaanka oo ay Iran taageerto.
Mr Sadri wuxuu ugu jawaabay isaga oo wacay Mr Amiiri iney Ra'sul Wasaaraha ku caawin karaan iney u diidaan codka kalsoonida baarlamanaka sidaana doorasha cusub ay ku dhacdo.
Khamiistina Madaxweyne Saalix wuxuu Talafishiinka uu ka sheegay Mr Mahdi inuu oggolaaday inuu xilka ka dago haddii marba ay xisbiyada aqlabiyadda ku leh baarlamaanka "ay keeneen fursad kale oo la qabali karo arrimahana sahlayo."
"Tallaabbadaasi oo muujineyso ka go'naashaha dhowridda dastuurka iyo sharciga loogana hortago dastuurka in lagu xadgudbo.
Wuxuu sida oo kale madaxweynaha sheegay inuu ku baaqay in la qabto doorasho xilligeeda laga soo hormariyey, balse ay qabsoomi karin ilaa sharciga cusub ee doorashada la meel mariyo.
Maalma kooban gudahood waxaa xilalkooda iney iska casilaan lagu qasabay laba Ra'isul Wasaare oo laba waddan oo carbeed ka soo jeeda kaddib marki ay la kulmeen mudaharaadyo xooggan oo looga soo horjeedo, Ra'isul Wasaaraha labaad oo ah Sacad Xariiri ee dalka Libnan.
Tifaftiraha BBC ee Bariga dhexe Jeremy Bowen wuxuu sheegay mudaharaadyada labada dal ka dhacay iney cabshaooyinka ay mudaharaadayaasha soo jeedinayaan ay wax badan isaga egyihiin sida ay la wadaagaanba waddama badan oo gobolka ku yaalla.
Haddii ay mar sii horreysay kacdoonnadi carabta ka dhacay 2011-ka dhaceen, wuxuu sii raaciyey sababihi dadku iney xilligaasi kacdoonnada waddooyinka ka sameeyaan ku kallifay ayaa weli sii jira iyada oo la maraya 2019-ka.